I-Google Local Business
Google kuShishino lwam kuPhendlo lwaseKhaya
NgoMgqibelo, Matshi 7, 2015 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngo-Epreli ophelileyo, ndenze iposti malunga I-Google Ibhizinisi Lwam. Kule mpelaveki, ndiyithathile intombi yam ekumiselweni kweenwele zakhe. Isalon ibintle kwaye abantu abasebenza apho bebemnandi. Umniniwo undibuze ukuba ndizenzela ntoni kwaye ndamxelela ukuba ndinceda iinkampani kwintengiso yazo kwi-Intanethi.
Sasimi ekhompyutheni kwaye wabelana nam ukuba inqaku lakhe lokuthengisa umboneleli naye wenza iwebhusayithi yakhe. Ndimcelile ukuba akhangele kuGoogle "Umgcini weenwele, iGreenwood, IN". Kwavela imephu entle ngalo lonke ukhuphiswano ... kodwa akukho kungena kwisalon yakhe. Ndamhambisa apapashe ishishini lakhe kuGoogle My Business kwaye ithathe yonke imizuzu eli-10.
Ukuba ukwishishini lokuthengisa iiwebhusayithi kumashishini engingqi okanye ukwenza ulwaziso lweinjini yokukhangela, ungakushiya njani oku kwisicwangciso sakho? Imahala, iphezulu kwiphepha lokukhangela, kwaye kulula ukuyisebenzisa! UGoogle wongeze uhlaziyo lwasekhaya kwiphepha.
Nokuba awunguye ishishini lengingqi, ndingakucebisa ukuba usebenzise uGoogle Bhizinisi lam. Amashishini ayathanda ukusebenzisa izixhobo zasekhaya kuba kulula ukunxibelelana nabo, ukutyelela, kunye nokufumana inkxaso kuyo. Thenga ekuhlaleni, thenga ekuhlaleni, khangela kwindawo… kwaye udwelise ishishini lakho ukuze ufumaneke. I-Bing ikwanayo iZiko lokuDwelisa laseKhaya
tags: iimephu zebingIshishini lasekhaya kuGoogleUGoogle ishishini lamukukhangela kwendawoUkulungiswa kweinjini yokukhangela zasekhayayendawo seo
Ukusebenza kweentlobo zoMxholo kwiB2B yeNtengiso yezeNtlalontle
Mar 25, 2010 ngo-10: 52 AM
Ndicinga ukuba uninzi lwamajelo osasaza ulwazi lwakho kunye nokwakha ubukho beshishini lakho, kokukhona uya kufumana ii-eyeballs kwaye ukomelela uphawu lwakho luya kuba. Ishishini likaGoogle laseKhaya ngokuqinisekileyo luluhlu lwam!
Mar 23, 2011 ngo 1:50 PM
Uninzi lwexesha abanini bamashishini baxakeke kakhulu kukuthengisa iinkampani zabo kwiindawo zonxibelelwano okanye kwi-intanethi kangangokuba bahlala bezijonga ezi ndlela. Oku kuyinyani ngakumbi kumashishini amadala omama kunye neepop, awayehlala exhomekeke kwilizwi lomlomo igama leenkampani zabo.
Meyi 13, 2011 kwi-11: 35 AM
Sichithe ixesha elininzi sisebenzisa amashishini abaxumi basekuhlaleni kuShishino lwaseKhaya kuGoogle nakwiiMephu kwaye sisebenzisa iMaphu yokuNyusa. Umzekelo enye yeendawo zethu zokupaka iinkampani zokumisa izithuthi zifumana isiqingatha sezithuthi zazo kuluhlu lweeMephu kuphela. Ukuba neshishini lakho kwiphepha lokuqala kubalulekile kwaye sibona ithuba kubaxumi bethu njengoko sifumana kwiphepha elinye amaxesha amaninzi ngenxa yamagama abo aphambili "emali". Ndiyathanda ukufumana abathengi kwiiMephu, i-PPC kunye neNdalo. Ukwenza oku ndinokugubungela i-10-15% yawo onke amaphepha e-real estate. Xa abathengi abanokubakho besenza uphando kwaye babone ngaphezulu koluhlu olunye ngentla apha okanye ngaphantsi kwesibaya sibona ishishini elitsha, singasathethi ke ngabathengi abatsha.